Ndiani anogona kurarama saRichard Stallman? | Linux Vakapindwa muropa
Ndakaverenga hurukuro izvo zvavakaita kuna Richard Stallman uye ini ndakasara ndichifunga: ndingagone kurarama seizvi? Ichokwadi ndechekuti mhinduro yacho inonzwika uye pasina kupokana: HAPANA. Uye chokwadi ndechekuti ini handizive chero munhu anozviita, uye handifunge kuti chero munhu anogona kuzviita, kunze kwake iye. Pamwe ndosaka ari iye zvaari. Asi ngatione zvimwe zvezvinhu zvinoshamisa kwazvo zveiyo bvunzurudzo:
Kazhinji yenguva ini handina internet yekubatanidza. Imwe kana mbiri kana katatu pazuva ndinoenda online uye ndinotumira uye ndinogamuchira tsamba. Ndisati ndatumira tsamba, ndinogara ndichiongorora uye kuongorora mameseji anobuda. Izvi zvinondipa mukana wekuona zvikanganiso.
Kudzokorora maemail usati waatumira, kunyangwe ichiita senge schizophrenic kwandiri, ndinogona kusvika pakuzvinzwisisa, asi ndisina Internet? Ndine urombo, handikwanise, handikwanisi ... Uye handinzwisise kuti sei munhu akakodzera kudaro munyika yekomputa angave "anofambidzana" asina Indaneti. Nhau dzakanaka ndedzekuti iwe unogona kugara kure nezvinotsausa zvisina musoro.
Ini ndinoshandisa yakawanda yenguva yangu ndichishandisa Emacs. Ndinoimhanyisa mumodi yekunyaradza, saka ini handifanire kunetseka nezve netsaona kurova mbeva pombi uye kufambisa iyo cursor, kungave kuri kurwadziwa. Ndakaverenga nekutumira mameseji nemaEmacs (email ndiyo yandinoita nguva zhinji).
Ini ndinoshandura kuna X pandinoda kuita chimwe chinhu graphic, sekutarisa pamufananidzo kana faira rePDF
Ok, Emacs ndiko kusika kwake kukuru uye zvine musoro kuti anogara naye, kwaari uye kubva kwaari asi izvi zvakanyanyisa? Iyo mbeva inoita kunge ine allergy! Zvirinani rinoziva kuti rinoisa iyo X kuona mifananidzo uye maPDF. Ini, sepakutanga, ndinofanira kutaura kuti ndinotadza kunge ndiri mumodi yekunyaradza nguva dzese.
Pamwe ndiri mukomana asina kujairika, asi ndisina mahwindo angu, ndisina mapikicha uye mavhidhiyo, uye ndisina graphical web browser, handisi munhu. Chero ani akatenderedza pano anoshandisa yakawanda nguva mune console mode pane ari giraidhi mode?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Ndiani anogona kurarama saRichard Stallman?
Chimwe chinhu: Stallman haamwi Coke. Ndiani anogona kurarama pasina Coca Cola?
Pindura ku braulio
Ini ndaisa pasuru yekuona mifananidzo mukoni, ini ndinotanga mplayer nemamwe ma parameter kuti ndione pazere skrini, ndinoshandisa zvinongedzo2, zvinongedzo, w3c, kufamba, asi ndinoita izvi zvese ndichiisa pamwe apt-kuvaka mapakeji ayo ndinakidze
Iwo akanakisa epasirese epasi rose ari kushandisa X ine pseudo-graphical interface uye nekushandisa yakawanda yakawanda zvinyorwa sezvinobvira.
Kunyangwe ini ndisina kupatsanurwa kubva kune yangu graphical interface, hongu.
Pindura kuna Alxe
Ini pachangu, ini ndinoedza kushandisa iyo console zvakanyanya sezvinobvira.
Kurarama seizvi hakutenderi kuti uve nehupamhi hwechigadzirwa
Izvo zvinoenderana, kana iwe uchiziva kushandisa Emacs koni mirairo, mabasa mazhinji akarerutswa (uye ine akawanda mashandiro, pamwe nezvinowedzerwa zvakakodzera), uye kana iwe uchikwana zvakakwana iyo graphical nharaunda inogona kutombova chipingamupinyi, kunyangwe zvichitsamira Kubva pabasa raunoita, ndinofunga haangodi mamiriro ekushongedza kuti aite zvese zvese pakombuta, anozvipirawo kuchirongwa saka ini handione kuti giraidhi ingamubatsira sei.
Ive nekuchenjerera, ini handisi kushoropodza mhinduro yako, zvinongova zvandinofunga, zvekuti hazvinzwisisike serumwe rudzi rwehasha kana chimwe chinhu.
Pindura kuna seishirosakurazuka
Kwandiri iko kuwedzeredza, kana akararama achifara zvakanyatsonaka kwaari, sezvo ruzhinji rungasaita zvakawanda pasina graphical interface uye ini ndinozvitaura ndichitambira kuti ndinoda kushandisa koni zvakanyanya.
Ini ndinoshamisika kana Stallman anoshandisa microwave iyo yake yekushandisa system yakavharwa.
Ini ndinoedza kushandisa iyo console, kunyangwe shamwari dzangu nehama yangu vachindidaidza 'weird guy', asi ndichigara ndisina internet, aiwa, hazvigoneke, zvakanaka, dzimwe nguva zvinogoneka, asi kana ndakanyanya kufinhwa, internet yakakosha.
hesi rega kumutsoropodza. nekuda kwezviito zvake zvinodiwa kwaari, nekuve baba vemahara software.
Haatombotiudza kuti tirarame nenzira yake.
Zvakare nezve kusashandisa X kwakakura kazhinji. Ini ndinoshandisa X asi angangoita ese mashandisirwo angu tty sezvo ichikurumidza, yakagadzikana uye ichiwedzera kugadzirwa kwako.
Hupenyu hwakasimba hwakafanira kwaari.
Kana iwe ukaona chero imwezve hurukuro yaStallman iwe uchaona maitiro aanodzivirira GNU / Linux senzira yazvino, pakati pezvimwe zvinhu zvemamiriro akajeka emifananidzo (kunyangwe zvisiri zvechizvino-zvino nekuda kwechikonzero ichi) asi kuti unoshoropodza mashandisiro aStallman eiyo inoshanda system , kana Chinotsvakwa irusununguko rwemushandisi rwunoita serwakapusa kwandiri.
Pindura kuna Scipion
Ini ndinofunga hapana munhu akashoropodza zvinoitwa naStallman, ndinongofunga kuti handigone kurarama saiye, ndisina grafiki nharaunda uye zvisingaite pasina Internet. Asi huya, shamwari shamwari inoita Richard inoita seinorumbidzwa chose kwandiri, chete izvo zvandaisakwanisa, hapana chimwezve.
Ngatimboonai, ini handikwanise kurarama ndisina internet kana pasina X11 chero (asi kana iro dutu guru rezuva ravanotaura pamusoro pazvo pamusoro pechauya chaizvo, hatingave nemumwe uye richard stallman anga agadzirirwa zviri nani xP)
Izvi ndozvazviri nekusavimba zvakanyanya nenyika yanhasi kana zuva richitirwisa zvakanyanya stallman haingavimbe zvakanyanya nehunyanzvi sezvatiri uye ingadai yakagadzirira zvirinani, uye nedumbu raanaro (ini handina anoda kugumbura) aigona kutsungirira asingazungunuke kwemazuva mashoma
Aya ndiwo marongerwo akaitwa ngano… uye zvakadaro, dzimwe nguva ndinoshamisika kana ini ndisingade kurarama saiye, pasina nyika yanhasi kuvimba neinternet.
Pasina internet ini ndaisakwanisa kurarama.
Pasina iyo X hongu, zvirinani chinhu choga chandinoshandisa negui FireFox, uye chechi pane w3m.
Asi pasina emacs: p. Ini ndakanaka nemasaini ekushandisa andatove ndoshandisa (vim, mutt, irssi, tmux, nezvimwewo)
Chero ani akaisa Arch achange ave nenguva yakanaka pakoni: P
Ichokwadi ichokwadi, kana Slackware kana Gentoo Linux xP
Ona, ini pachangu ndiri kuishandisa neWM Inotyisa, asi pachokwadi ndakafunga kuiisa pamwe nekuda kwechikonzero ichocho, ini ndaida kutanga nezvose zviri muLinux, uye kunyangwe ndanga ndashandisa Ubuntu zvishoma ini ndaisazvida zvakanyanya (ini usataure kuti zvakashata, muchokwadi mune Imwe yemacomputer angu ndinoishandisa nguva nenguva, chandinonunura zvakanyanya kubva apa inyaradzo mune inoenzanisira nharaunda -kana iwe uchichengeta Kubatana- kana uchida mbeva) uye Ini ndaida kuyedza chimwe chinhu, zvakare sezvavakandiudza pa IRC kuti ndiedze nechimwe chinhu chiri nyore, kuti izvi zvakaoma zvikuru uye zvakandiita kuti ndinyanye kuda kuzvishandisa, asi sezvo ndakanga ndisingazive chero chinhu chakanditorera mazuva matanhatu kuiisa uye kuisiya ichishanda nemamiriro ekunze, kunyangwe pakutanga ini ndaishandisa kde, iyo nenzira yandisina kuifarira (ipfungwa yega, ndinoziva kuti kune vakawanda ndiyo yakanakisa graphic nharaunda uye ndinoremekedza it), kunyangwe ndauya kuzopa kutarisa kunofadza panguva yacho. Iye zvino ini ndinoshandisa iyi OS ndoda chete, ini ndichiri kushandisa Windows asi chete kutamba mitambo.
Ini ndoda kuyedza Gentoo, ndinofunga ndiwo mukaka uye unodzidza zvakawanda, asi handina kuzvipa nguva yekushanda.
Handina basa nazvo zvishoma kana zvakawanda. Izvo zvakakosha kwandiri ndezvekuti RMS yakatsanangura yemahara software, yakaitangisa sesangano renzanga uye ichienderera ichizvidzivirira, ichokwadi kune ayo mazano (uye yekupedzisira inoshungurudza vanhu vazhinji).
@Edgar: Kwete chete avo vanoisa Arch, chinhu chimwe chete chakaitika kwandiri nebuntu, zvakatotaurwa kuti chero distro yakaoma kana ikaitwa "tsika"
Ini ndinofunga pane nguva dzose tsika yekutsausa nyaya, kwese kwese vanhu vanotsauka, kana vachitaura nezveUbuntu kubvisa Gimp, mubvunzo ndozvavanofunga pamusoro pazvo, uye zvinopesana, nharo pamusoro paMark Shuttleworth dzinotanga kubuda. Saizvozvowo pano, mubvunzo ndewokuti dai vaigona kurarama saiye, uye ivo vanotanga kukakavara kubudirira kwaakaita, ndinofunga kuti kubva ipapo zvese zvinotanga kutsauka uye vanopedzisira votaura nezvezvinhu izvo zvisina kana hari ine positi.
Panzvimbo pekutarisa pazvinhu zvakakosha, yatove blog izere nekusahadzika kwekuvapo senge:
waizoitei dai richard stallman aive baba vako?
kana magedhi ebhiri aive gya uye linus mukomana wemukomana?
dai mac yaive yemahara?
kana makuhwa magazini
Ini handishandisi bhurawuza
Ini handishandise internet
ENDA KUNA DHIABHOSI STALLMAN UYE FAKES YAKE !!!
Unoenda kugehena ZVINOSHAYA kuti vamwe vararame sezvavanoda ndihwo HVO hupenyu kwete HWAKO, saka rarama uye rega LIVE usaite sembwa iri muchidyiro isingadye kana kurega kudya mamarracho
Hahaha, iwe unondiyeuchidza nezvemurume uya muhombe kubva kune iyo yekare nerd kutsiva bhaisikopo: NEEEEEEEEERERDDD !!!!!
Hahaha, zvakanaka, funga zvaunoda, asi tenda kwandiri unogumbura vanhu vazhinji pano, kunyangwe kana zvisingaite senge. Ini ndinenge ndine nharembozha kunyanya kana shefu wangu kana amai vangu vandisheedza, asi ini handizvipe zvimwe zvinoshandiswa, uye nezve browser ... nah, ndinorishandisa (ndinosiyana pakati peFirefox muX kana Anonamira muTty), asi ini handione kuti nei paine chakakanganisika nekuti ndoshandisa bhurawuza ...
Kana iri internet ... ini ndinoishandisa kamwe pavhiki zvakanyanya. Dzimwe nguva ndinotsamwa uye ndinofambisa kangani pavhiki asi kwete zvakanyanya. Pane chakaipa here?
Bah, hazvina basa, pachagara paine troll.
William Rodriguez akadaro
hahaha enda kugehena hahaha zvishoma iwe uri mumwe wevaya vanoshandisa yako facebook account kuti upinde mune zvese uye iwe hauzive kuti zviri nyore sei kunanzva dhata rako uye kutora data rako uye kupinda mukati kune ese maapplication awakanyora mukati ku facebook uye ita zvakafanana neGoogle's uye nekusaziva ivo vanochengetedza ako ewhatsapp hurukuro, avo vaunofambidzana navo, ako akanyorwa mafoni, nzvimbo yako, ndeyegiravhiti uye kutya kwaasingaise njodzi. Nhasi ndiri injinjini yemasisitimu ine simbiso pakuchengetedzwa kwemakomputa, ndinotora njodzi yekunzwisisa njodzi nekuti zvinenge zvisingaite kusagovana dhata, kunze kweizvozvo nhasi ese maficha ekutsvaga iwe uchitsvaga ruzivo rwezvinhu zvaunofarira.
kunzvenga kutora njodzi haufaniri batanidza…. iye ari Ultra hadcore
Tinofanira kutenda vanhu vakaita saiye, isu hatisi vasina shungu pakubata ruzivo rwedu painternet.
Pindura kuna william rodriguez
Chandisingazive ndechekuti nei ichitaridzwa, munhu wese anogona kurarama sezvaanoda. Zvisinei, izvo zvakakosha kwatiri nezvake ibasa raanotora nekutora sezvisina basa uye kudzivirira marezinesi akavharwa.
Ngatione kana iko zvino kwekuda kurarama sezvavanoda varombo ichave mhosva
Haana kumbobvira ati anoda kuti tigare saiye, ndizvo zvinhu zvake zvaano govana nesu.
@Pedro dai isiri RS pangadai pasina linux kana yemahara software
Knowlee roher akadaro
«Chupy35: pachinzvimbo chekutarisa pazvinhu zvakakosha, yatova blog izere nekusahadzika kuripo senge:
kana makuhwa magazini »
Mwana ari pachokwadi, vakatotadza kurasa hunhu hwavaive nahwo, vanongoita nharo dzisina musoro, vanowedzera posvo yechirongwa 9 kubva kubhero labs,
Pindura kuna Knowlee Roher
Ini ndinoshandisa 90% yenguva pane iyo koni kubasa. Kumba ndinoenda pane dzimwe nguva zvichienderana nezvandiri kuita neFreeBSD zvakajairika kuva nenguva dzakanaka pakoni.
1 + 8 akadaro
Chaizvoizvo mushandisi wemazuvano, sisitimu inoshanda haipfuure nepamahwindo uye nemamiriro akajeka, nekuti zuva raunotarisana necc mune zvinyorwa mode ... .wakarasika.
Pindura kuna 1 + 8
Zvakanaka, ini ndinoshanda ingangoita 75% yenguva neconsole, ndichingosvika kumba ndinoshandisa graphical interface.
Pindura kuna Ferikisi
Ini ndinofunga kuti iyo koni chinhu chakakosha, hongu iwe unogara uchifanira kuziva kuti ungasanganisa sei nezvimwe graphic nzvimbo, asi kune zvisingaperi mabhenefiti ekushandisa koni, uye nhasi kushandisa yakawandisa magirafu inodya yakawanda ram uye yakawanda vhidhiyo, zveumbozha. mutengo, uye kuti rudo rwunogara rwakazvarwa kune vazhinji vekuona.
Pindura kune provirus
Zvakanaka, kana iwe usinganzwisise mararamiro aungaita usina foni kana neinternet shoma, rega ndikuudze kuti ndiwe uri kukanganisa, nekuti pfungwa dzako dzakavharika zvekuti haugone kuona zvimwe zviripo nesarudzo zviripo chimiro chekuona.
Ini pachangu, kubva pandakarega kushandisa nharembozha uye kuziva Internet, kubvira pandakaraira uye nekudzora hupenyu hwangu, kudziya kwacho kwawedzera zvakanyanya, parizvino handisi kushandisa nhare kunyangwe ivo vachindibhadhara, uye vanga vachida kuzviita kakawanda, asi ini chete ndine hupenyu, uye ini ndinoronga kuinakidzwa nemukadzi wangu nevana ... kunyanya nemukadzi wangu.
Zvakanaka ndinoremekedza maonero ako asi kana ukaenda kunze uko kana uine musangano (ini handizive kuti uchave nebasa here) kana chimwe chakadai kana chimbichimbi chouya, unozivisa sei? kana ukaita tsaona nemota (Mwari ngavarambe) haifanire kunge iri mhosva yako pane macazurros mazhinji ari pairi izvi, ko iwe unoti chii rori yekudhonza?
Izvo zvaidikanwa kujekesa kuti anorarama mune zvehupfumi
Ini ndinoishandisa mune console mode nguva dzese
Ini ndinogadzirisa mifananidzo mune console mode, byte byte. Zvinonyanya kufadza ndezve png's. Zvinogona kunge zvichinetesa, asi zvinonakidza kuziva kuti chii chichaitika kana iwe ukatengesa matatu kune F.
Mira Motion vhidhiyo ndeimwe yekunakidzwa kwangu kukuru, asi ini handikwanise kubatanidza iyo terminal kune yangu vhidhiyo kamera, iyo ine chete imwe terminal ...
Pamwe Stallman ndiNeo, uye iye anoona zvese mune rekodhi kodhi ... ndosaka iye asingade X
Munhu anoziva kuti kambani ine isiri-tsvene maitiro !!! verenga http://killercoke.org/
Ini ndinogona kurarama ndisina coke, handinwe zvinopfuura CHIMWE musi weMugovera uye kwete (nekuda kwebasa)
Ini ndinowanzo nwa doro nesoda (yakawanda soda kupfuura doro) asi hei
pano ndine mubvunzo uri nani:
Ndiani anogona kurarama asina kutora chikamu mumakakatanwa akapusa seaya ari muBlog ino?
Ini ndinofunga kugadzirira chinyorwa nezve Stallman kuti chibudiswe mu magazinelinux.net (chirongwa chitsva chakabatana neLinux +)
Kune akawanda 100% emahara distros, iyi ndiyo kurwira ogg inova multimedia, saka kuve 100% zvinogoneka uye vanhu vazhinji vanozviita
ko marara sei arikutaura apa. Ehe, iwe haushandise iyo internet, iwe unofanirwa kuve uri munhu anonyanya kufarira nezve masystem asina nguva yekuona p0rn0 zuva rese seWE!
Usati wanyora "chinyorwa" uye wodaidza Richard Stallman kupenga, unofanira kuzvitarisa. Iye murume ane hunyanzvi, uye kana iwe ukatarisa kune zvakawanda zvinhu zvaanotaura zvine musoro uye maitiro ake chikamu chekusaziva kwake, izvo kwandiri zvinoita sekuseka uye kwakavakirwa pamisimboti yerusununguko.
Chinyorwa ichi chinondisemesa, vanofanirwa kuchidzima.
Stallman anogara seizvi nekuti iye guru
isu tiri vanhuwo zvavo !!!
Munguva pfupi ndinoshandisa internet zvishoma (kana zviripo kutarisa maforamu), asi ini handirarame ndisina KDE kana GNOME kana chero graphical interface
Pindura kuna Ano-nimo
fbi ==> tarisa mifananidzo paconsole
fbgs ==> ona pdf mune koni
alpine ==> maneja maneja, zvirinani pane mubrowser, kunyangwe ye gmail
centerim ==> msn, gtalk, IRC ... panguva imwe chete paconsole
rtorrent ==> nzizi pakoni
mplayer ==> mumhanzi uye vhidhiyo pakoni
zvinongedzo ==> webhu bhurawuza (ine -g sarudzo, iwo mawebhu anoonekwa mune graphic modhi kubva kunyowani)
dvtm ==> yakawanda panguva imwe chete yekunyaradza zvikamu pane imwe skrini
aumix ==> musanganiswa wezwi
wicd-vanotuka ==> scan uye kubatanidza kune wifi, uye network
nhare yedhorobha ==> mutambo wangu weascii wandinofarira, unogona kumhanyisa muascii chaiyo kubva pakoni, nekugadzirisa faira rekumisikidza
hahaha usaite zvehasha akadaro
Mapenzi, chokwadi chevagadziri, iyo keyboard ndizvo zvese, hapana keyboard inodikanwa, haina kushandisa graphic nzvimbo nekuti haina kugara memeoria, ndimai kana iwe ukangozvipira iwe kuchirongwa uye zvakanyanya kuchengetedzeka, iyo interter yakachengeteka uye stallman emigienece achiona vhidhiyo remepu yangu Kanak duel kurodha mumhanzi regeton kana kuisa mavhidhiyo hapana mammmmm jajja zvakanaka e sun boy yemakore gumi nemashanu iyo precos uye iyo internet uye iwe unofungei kana hotmail pasina internet
kana isu isu kubva kuGoogle ndeye hunyanzvi hazvo ivo vasinganzwisisike kusagadzikana saka zvinofanirwa kunge zvichikanganisa uye kufunga nezve dhongi kungo haha ​​haha ​​haashandise nharembozha haabhadhare bhaa haha ​​kutarisira kuti asununguka haha chokwadi chinoshamisa asi zvinobva kune imwe nguva iyi guro asi vashoma vanotenda kuti iye makina ake akachengetedzeka maitiro akajairika interface izvo zvinofanirwa kunge zvakanaka kune stallman kuishandisa haha ​​zvirokwazvo haashandisi google haha Kana kumeso kana chero mumwe munhu anoyamwa zvirinani usati watsoropodza zvirinani uwane kudzidza kana iwe wakarasa kupedzisa chikoro chako chepamusoro haha
Pindura kuhahaha Usaita hasha
Zvakanaka, ini ndinogara mune console mode, uye 98% irikushandisa imwechete .. Coca cola kana ndikanwa uye yakawanda .. asi ipapo ini ndinongoda vi, kana emacs kusimudzira .. Kwaziso
Heh heh, zvese zvichave, kunze kwekunge ndataura zvinoitika pasina internet ... hehe heh heh asi zvinogona kudaro zvinoitika ... chokwadi ndiani anoziva ... !!!
tsime, ndanga ndichishanda ne linux kwemakore maviri ... hongu ndinoifarira zvishoma zvishoma ndiri kushandisa koni ... asi kudzidza linux paconsole yandaifanira kushandisa slackware ... nekuti ubuntu zvese zvakakodzera-tora kuisa xxxx ...
asi hei, kwaziso kune vese ... linuxers ...
Kune chikamu changu, kana ndikashandisa mapurogiramu akawanda e-console, ndinofamba new3m, ndinotaura necentim, ndinoteerera mimhanzi mumoc, handishandisi emacs asi ndinoita nano.
cmus ==> Muunganidzwa weMimhanzi pane koni (senge unotsunga)
youtube-viewer ==> Wona uye / kana kurodha mavhidhiyo ewindows pane console, (shandisa mplayer)
Chekutanga pane zvese Vladimir, iwe uri chidhori, ini ndichaedza zvese izvo.
Chechipiri ... handigoni kuzvitenda, zvirinani maererano neInternet kubatana isu takafanana, mune mamwe ese kwete zvakanyanya, ndinoshandisa graphical nharaunda zvakanyanya, asi munzvimbo inotyisa uye zvizhinji zvezvinhu zvandinoita kubva pakoni, ndinoida, ndinoshandisa Zvinotyisa pachinzvimbo chekuenda wakananga tty nekuti ndinogona kubata akawanda windows kamwechete, kunyangwe emacs anogona kuita zvakafanana kana zvasvika kune, semuenzaniso, kuronga uye zvinhu, uye ine toni mashandiro. Ini handizive zvavanowana, vamwe vedu vanofarira kugara mukoni, kunyangwe dzimwe nguva, mune yangu zvirinani, ndinozviona zvakaoma kuita zvimwe zvinhu, ini handina kunaka saStallman pazvinhu izvozvo (uye ndizvo kutaura zvishoma, mutsauko Unofanira kunge uri muhombe), asi kuona ichi chinyorwa kwaita zuva rangu.